Ngubani uMoya oyiNgcwele? Umntu wesithathu woBathathu Emnye
UMoya oyiNgcwele Ukhokela kunye noMcebisi kubo bonke amaKristu
UMoya oyiNgcwele unguMntu wesithathu kaZiqu zintathu kwaye ngokungangabazeki ilungu elincinane eliqondayo lobuThixo.
AmaKristu anokukwazi ukubona ngoThixo uBawo (uYehova okanye uYehova) kunye noNyana wakhe, uYesu Kristu . UMoya oyiNgcwele, nangona kunjalo, ngaphandle komzimba kunye negama lakhe, libonakala likude kwabaninzi, kodwa uhlala ngaphakathi kuyo yonke inkolelo yokwenyaniso kwaye uhlala ehamba naye ekuhambeni kokholo.
Ngubani oyiNgcwele oyiNgcwele?
Kwada kwamashumi ambalwa eminyaka edlulileyo, amasonto amaKatolika kunye namaProtestanti asebenzisa igama elithi Holy Ghost.
I- King James Version (KJV) yeBhayibhile, yokuqala eyapapashwa ngo-1611, isebenzisa igama elithi Holy Ghost, kodwa yonke inguqulelo yanamhlanje, kuquka i- New King James Version , isebenzisa uMoya oyiNgcwele. Amanye amacawa asePentekosti asebenzisa i-KJV ayakhuluma ngoMoya oyiNgcwele.
NjengoThixo, uMoya oyiNgcwele ukhona ngonaphakade. KwiTestamente Elidala, ubizwa ngokuba nguMoya, uMoya kaThixo, noMoya weNkosi. KwiTestamente Entsha, maxa wambi kuthiwa nguMoya kaKristu.
UMoya oyiNgcwele ubonakala kuqala kwivesi lesibili yeBhayibhile, kwingxelo yendalo :
Ke kaloku umhlaba wawungenasici kwaye ungenanto, ubumnyama bebuphezu kobuso bunzulu, kwaye uMoya kaThixo wawuhamba phezu kwamanzi. (Genesis 1: 2, NIV ).
UMoya oyiNgcwele wenza ukuba iNtombikazi uMariya ikhulelwe (Mateyu 1:20), kwaye ekubhaptizweni kukaYesu , wehla kuYesu njengejuba. Ngomhla wePentekoste , waphumula njengeelwimi zomlilo kubapostile .
Kwiimifanekiso ezininzi zezenkolo kunye neenkcukacha zecawa, udla ngokubonakaliswa njengehobe .
Ekubeni igama lesiHebhere loMoya kwiTestamente elidala lithetha "umoya" okanye "umoya," uYesu waphefumlela kubapostile emva kokuvuswa kwakhe wathi, "Mkele uMoya oyiNgcwele." (Yohane 20:22, NIV). Walaya abalandeli bakhe ukuba babhaptize abantu egameni likaYise, uNyana, noMoya oyiNgcwele.
Imisebenzi kaThixo yoMoya oyiNgcwele , kokubili evulekile nasekusithekeni, ukuqhubela phambili isicwangciso sikaThixo sokusindiswa nguYise. Wabamba inxaxheba ekudalweni kunye noYise noNyana, bazalisa abaprofeti ngeLizwi likaThixo , bancedisa uYesu nabapostile kwimisebenzi yabo, baphefumlela amadoda abhala iBhayibhile, baqondisa ibandla, bazingcwalisa abazalwana ekuhambeni kwabo noKristu namhlanje.
Unika izipho zokomoya ukuqinisa umzimba kaKristu. Namhlanje usebenza njengobukho bukaKristu emhlabeni, ukucebisa nokukhuthaza amaKristu njengoko balwa nezilingo zehlabathi kunye nemikhosi kaSathana.
Igama likaMoya oyiNgcwele lichaza impawu zakhe eziyinhloko: Ungumntu oyingcwele kwaye ongenabala, ongenasono okanye ubumnyama. Ukwabelana ngamandla kaThixo uBawo noYesu, njengokungaziwa, ubunamandla kunye nokungahleli ngonaphakade. Ngokufanayo, unothando-othethelelayo, onenceba nolungileyo.
Kulo lonke iBhayibhile, sibona uMoya oyiNgcwele ugalela amandla akhe kubafundi bakaThixo. Xa sicinga ngamanani afana noYosefu , uMoses , uDavide , uPetros noPawulos , sinokuvakalelwa kukuba asinanto efana nabo, kodwa inyaniso kukuba uMoya oyiNgcwele uncede ngamnye wabo utshintshe. Umi ukulungele ukusinceda sitshintshe ukusuka kumntu esiyiyo namhlanje kumntu esifuna ukuba nawo, sisondele ngakumbi kumlingiswa kaKristu.
Ilungu lobuThixo, uMoya oyiNgcwele wayengenaso isiqalo kwaye akanasiphelo. NgoYise noNyana, wayekho ngaphambi kokudala. UMoya uhlala ezulwini kodwa nakwiMhlaba entliziyweni yazo zonke iikholwa.
Umoya Ongcwele usebenza njengomfundisi, umcebisi, umthuthuzeli, oqinisayo, ugqozi, umtyhilwa kweZibhalo, ukukholisa isono , umnxebi weentlanganiso, kunye nomncinci ngomthandazo .
Ukubhekisela kuMoya oyiNgcwele eBhayibhileni:
UMoya oyiNgcwele ubonakala phantse yonke incwadi yeBhayibhile .
Sifundo seMoya oyiNgcwele
Qhubeka ufundela isifundo seBhayibhile esiphambili ngoMoya oyiNgcwele.
UMoya oyiNgcwele unguMntu
UMoya oyiNgcwele uhlanganiswe kuZiqu zintathu , ezenziwe ngabantu abathathu abahlukeneyo: UBawo , uNyana , noMoya oyiNgcwele. Iindinyana ezilandelayo zisinika umfanekiso omhle ngoBathathu Emnye eBhayibhileni:
Ngokukhawuleza ukuba uYesu (uNyana) abhaptizwe, wenyuka ephuma emanzini. Ngaloo mzuzwana izulu lavuleka, waza wabona uMoya kaThixo (uMoya oyiNgcwele) wehlela njengejuba waza wamkhanyisa. Kwaye ilizwi elivela ezulwini (uYise) lathi, Lo nguNyana wam, ndimthandayo; (NIV)
Ngako-ke hambani nenze abafundi beentlanga zonke, nibhaptize egameni likaYise noNyana noMoya oyiNgcwele, (NIV)
Yohane 14: 16-17
Ndiya kumcela uYise, kwaye uya kuninika omnye uMcebisi ukuba abe nani ngonaphakade-uMoya wenyaniso. Ihlabathi alikwazi ukumkela, kuba lingamboni kwaye alimazi. Kodwa uyazi, kuba uhlala nawe kwaye uya kuba kuwe. (NIV)
Kwangathi inceba yeNkosi uYesu Kristu , nothando lukaThixo, kunye nobudlelwane boMoya oyiNgcwele mayibe nani nonke. (NIV)
IZenzo 2: 32-33
UThixo umvusile lo Yesu ebomini, kwaye sonke sinamangqina enyaniso. Ukuphakanyiswa ngakwesokunene sikaThixo, ufumene kuYise uMoya oyiNgcwele othembisile kwaye uthe wathululela oko ubona ngoku kwaye uve. (NIV)
UMoya oyiNgcwele unempawu zobuntu:
UMoya oyiNgcwele unengqondo :
Ke yena ocinga iintliziyo zethu uyazi ingqondo kaMoya, ngokuba uMoya unxusela abangcwele ngokuvisisana nentando kaThixo. (NIV)
UMoya oyiNgcwele unomdla:
1 Korinte 12:11
Kodwa omnye uMoya ofanayo usebenza zonke ezi zinto, ehambisa ngamnye ngamnye ngokufanayo njengoko afuna. (NASB)
Umoya oyingcwele unemizwa , uyabuhlungu :
Noko ke bavukela, bamenza buhlungu uMoya oyiNgcwele. Ngoko wajika waza waba ngutshaba waza yena walwa nabo. (NIV)
UMoya oyiNgcwele unika uvuyo :
Luka 10: 21
Ngelo xesha uYesu, egcwele uvuyo ngoMoya oyiNgcwele, wathi, "Ndiyamdumisa, Baba, Nkosi yezulu nomhlaba, ngokuba uzifihlile ezi zinto kwizilumko nozifundileyo, wazibonakalisa kubantwana abancinci . , kuba oku kukuvuyisa kwakho. " (NIV)
1 kwabaseTesalonika 1: 6
Nibe ngabaxelisa thina neNkosi; Naphezu kokubandezeleka okukhulu, wamkela isigidimi ngovuyo olunikezwa nguMoya oyiNgcwele.
Kodwa uMcebisi, uMoya oyiNgcwele, lowo uYise uya kumthumela egameni lam, uya kukufundisa zonke izinto kwaye uya kukukhumbuza yonke into endikuxelele yona. (NIV)
Xa uMcebisi efika, endimthumelela kuwe evela kuYise, uMoya wenyaniso ophuma kuYise, uya kungqina ngam. (NIV)
Yohane 16: 8
Xa efika, uya kugweba ihlabathi lezono [okanye uya kutyhila ityala lehlabathi] ngokubhekiselele kwisono nobulungisa nomgwebo: (NIV)
U khokela :
Kuba abo baholwa nguMoya kaThixo bangabantwana bakaThixo. (NIV)
Utyhila Inyaniso :
Kodwa xa efika, uMoya wenyaniso, uya kukukhokela kuyo yonke inyaniso. Akayi kuthetha ngokwakhe; uya kuthetha kuphela oko akuvayo, kwaye uya kukuxelela oko kuza kuza. (NIV)
Uyabomeleza kwaye uyakhuthaza :
Kwaye icawa lonke elaseJudiya, eGalili naseSamariya lalinalo ixesha loxolo. Kwaqiniswa; kwaye wakhuthazwa nguMoya oyiNgcwele, wanda ngamanani, ehlala ukwesaba iNkosi. (NIV)
U thu thuzela :
Ndiya kuthandaza kuYise, kwaye uya kuninika omnye uMduduzi, ukuze ahlale nawe ngonaphakade; (KJV)
Uyasinceda ekuthathaka kwethu:
Ngendlela efanayo, uMoya usinceda ekubuthathaka kwethu. Asazi into esifanele siyithandazele yona, kodwa uMoya ngokwakhe uyasincenga ngenxa yokububula ukuba amazwi akakwazi ukuchaza.
Ngendlela efanayo, uMoya usinceda ekubuthathaka kwethu. Asazi into esifanele siyithandazele yona, kodwa uMoya ngokwakhe uyasincenga ngenxa yokububula ukuba amazwi akakwazi ukuchaza. (NIV)
Ufuna Izinto Ezizulu ZikaThixo:
Umoya uhlola zonke izinto, nokuba nezinto ezinzulu zikaThixo. Kuba ngubani phakathi kwabantu owaziyo iingcamango zomntu ngaphandle komoya womntu ngaphakathi kuye? Ngendlela efanayo akukho namnye owaziyo iingcamango zikaThixo ngaphandle koMoya kaThixo. (NIV)
U ngcwalisa :
Ukuba ngumlungiseleli kaKristu Yesu kwiintlanga kunye nomsebenzi wobubingeleli wokuvakalisa iindaba ezilungileyo zikaThixo, ukwenzela ukuba iintlanga zibe ngumnikelo owamkelekileyo kuThixo, ungcweliswe nguMoya oyiNgcwele. (NIV)
Ufaka ubungqina okanye ulingqina :
UMoya ngokwawo ufakazela ngomoya wethu, ukuba singabantwana bakaThixo: (KJV)
U ya thintela :
IZenzo 16: 6-7
UPawulos kunye nabalingane bakhe bahamba kulo lonke elaseFrigiya naseGalati, begcinwe nguMoya oyiNgcwele ukushumayela ilizwi kwiphondo lase-Asiya. Xa befika kumda weMisiya, bazama ukungena eBhithiniya, kodwa uMoya kaYesu akayi kubavumela. (NIV)
Unako Ukuxoxwa :
IZenzo 5: 3
Emva koko uPetros wathi, "Hananiya, kwenzeka njani ukuba uSathana uye wagcwalisa intliziyo yakho ukuba uthembele kuMoya oyiNgcwele kwaye uzigcinele enye yemali oyitholile umhlaba? (NIV)
Unako ukuMelana :
"Nina bantu abanezintamo, abanentliziyo engalukileyo neendlebe! Nina nje ngooyise: Nonke niyichasa uMoya oyiNgcwele!" (NIV)
Mateyu 12: 31-32
Kwaye ngoko ndithi kuni, zonke izono kunye nokunyelisa ziya ku xolelwa abantu, kodwa ukunyelisa uMoya akayi kuxolelwa. Nabani na othetha ilizwi ngokuchasene noNyana woMntu uya kuxolelwa, kodwa nabani na othetha ngokuchasene noMoya oyiNgcwele abayi kuxolelwa, mhlawumbi kule minyaka okanye kwixesha elizayo. (NIV)
Cima uMoya. (NKJV)
Ukwahlukana phakathi kweThuthi kunye neTyhubhu yamaFiberglass